November 4, 2021 - ApannPyay Media
November 4, 2021 by ApannPyay Media
ဒီလိုအကျင့်မျိုးရှိတယ်ဆိုရင် လူပျင်းလူညံ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ဒီအချက်တွေ သင့်မှာမရှိရင်တော့သင့်ကအောင်မြင်မယ့်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာအသေအချာပါပဲ။ ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရမယ့် အချက်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) အအိပ်လွန်ခြင်း…. လူအများစု၏ ဘဝ၏ သုံးပုံ တစ်ပုံသည် အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးသွားပါတယ်။ သင်က အသက် ၃၀ ဆို သင့်ဘဝရဲ့ ၁ဝနှစ်ကို အိပ်စက်ခြင်းတွေထဲမှာ သင်ပေးဆပ်လိုက်ရပါပြီ။ အိပ်တာက ကောင်းပါတယ်။ အိပ်ရေးဝဖို့ ၁ရက်ကို (၇-၈နာရီ)အိပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်က သာမန်ထက် ပိုပြီးနေ့ရောညရော အိပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သတိထားဖို့လိုနေပါပြီ။ အရမ်းအိပ်တတ်တဲ့ လူတွေက သူတို့ဘဝမှာ အိပ်တာထက် ကောင်းတဲ့ အလုပ် ဘာဆိုဘာမှ မရှိလို့ပါပဲ ။ ဒါကြောင့်ပဲ အအိပ်လွန်နေကြတယ်ထင်ပါတယ်။ သင်ရော လိုတာထက် သင့်ဘဝကို အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ဖြုန်းတီးနေပြီလား။ သင့်ဘဝကို လူပျင်း၊လူညံ တစ်ယောက်လို အိပ်စက်ခြင်းတွေနဲ့၊ … Read more
သိန်း ၂၀၀ အထိသာ ငွေသားနဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ် ဖို့ ဗဟိုဘဏ် အမိန့်ထုတ်
သိန်း ၂၀၀ အထိသာ ငွေသားနဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ် ဖို့ ဗဟိုဘဏ် အမိန့်ထုတ် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရင် (၁) ကြိမ်ကို ကျပ်ငွေ သိန်း ၂၀၀ ပဲ ငွေသားနဲ့ပေးချေရမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တာအားလုံးကို ဘဏ်လုပ်ငန်းအပေါ် အခြေခံတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှုကိုပဲ အသုံးပြုရမယ်လို့ စစ်ကောင်စီပိုင် ဗဟိုဘဏ်က နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက် မနေ့ကစပြီး အမိန့်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံး ရောင်းတာ၊ ဝယ်တာ၊ လွှဲပြောင်းတာတွေမှာ (၁) ကြိမ်ကို ငွေသား သိန်း ၂၀၀ ကျပ်ထက်မပိုပဲ ကျန်တဲ့ငွေပမာဏကို ဘဏ်စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း (Mobile Banking)၊ အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်း (Internet Banking)၊ ဘဏ်အကောင့်၊ ချက်လက်မှတ်နဲ့ ငွေပေးအမိန့်လွှာ (PC) စတာတွေ အသုံးပြုရမယ်လို့ … Read more
ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…
ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်… ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်… ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…ဆံ​တော်မုလအိစေတီတော်ဘုရားမှ သက်မဲ့လှေခါးလမ်လျောက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်… Credit to AlinnMyay ဆံ​ေတာ္မုလအိေစတီေတာ္ဘုရားမွ သက္မဲ့ေလွခါးလမ္ေလ်ာက္ေနတဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္ ဆံ​ေတာ္မုလအိေစတီေတာ္ဘုရားမွ သက္မဲ့ေလွခါးလမ္ေလ်ာက္ေနတဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္…ဆံ​ေတာ္မုလအိေစတီေတာ္ဘုရားမွ သက္မဲ့ေလွခါးလမ္ေလ်ာက္ေနတဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္…ဆံ​ေတာ္မုလအိေစတီေတာ္ဘုရားမွ သက္မဲ့ေလွခါးလမ္ေလ်ာက္ေနတဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္…ဆံ​ေတာ္မုလအိေစတီေတာ္ဘုရားမွ သက္မဲ့ေလွခါးလမ္ေလ်ာက္ေနတဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္…ဆံ​ေတာ္မုလအိေစတီေတာ္ဘုရားမွ သက္မဲ့ေလွခါးလမ္ေလ်ာက္ေနတဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္… ဆံ​ေတာ္မုလအိေစတီေတာ္ဘုရားမွ သက္မဲ့ေလွခါးလမ္ေလ်ာက္ေနတဲ့ … Read more
မျက်တောင်အတုတပ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်း မျက်တောင်မွှေးရှည်အောင်ပြုလုပ်နည်း
မျက်တောင်အတုတပ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်း မျက်တောင်မွှေးရှည်အောင်ပြုလုပ်နည်း လူတစ်ယောက်မှာ မျက်တောင်မွှေးရှည်ချင်ကလည်း အလှအပကို စွဲဆောင်စေတဲ့ အဓိကအချက်တစ်ချက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ မျက်တောင်မွှေးရှည်ခြင်းဟာလူတိုင်းလိုလိုတော့ မရရှိနိုင်တဲ့ ရှားပါးတဲ့ အလှတရား လက္ခဏာတစ်ရပ်ပဲဖြစ်တာကြောင့်မျက်တောင်မွှေးကို ရှည်အောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ၊ ထိန်းသိမ်းမလဲ ဆိုတာ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အီး မျက်တောင်ကော့တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ Brush တံကို ဗီတာမင်အီး အနည်းငယ်စွတ်ပြီး သင့်ရဲ့ မျက်တောင်မွှေးကို အချိန် ၅မိနစ်လောက် ဖြီးလိမ်းပေးပါ။တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဟာ မျက်တောင်မွှေးရဲ့ကြီးထွားနှုန်းကို လှုံ့ဆော်ပေးစေတဲ့အပြင် သာမန်ထက်လည်း အရှည်ပိုမြန်စေပါတယ်။ အုန်းဆီ သို့မဟုတ် သံလွင် အုန်းဆီ ဒါမှမဟုတ် သံလွင်ဆီတွင် အဟာရဓာတ်များကြွယ်ဝစေတဲ့ Fatty Acids များစွာပါဝင်တာကြောင့် သင့်မျက်တောင်မွှေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။သန့်စင်တဲ့ Brush တံ သို့မဟုတ် လက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အုန်ဆီ/သံလွင်ဆီကို နည်းငယ်စွတ်ပြီး အိမ်ယာသို့ မဝင်ခင်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ Petroleum … Read more
ဆောင်းရာသီမှာ ဗိုက်ပိုဆာပီး အစားများများ စားရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဆောင်းရာသီမှာ ဗိုက်ပိုဆာပီး အစားများများ စားရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ဆောင်းရာသီဟာ နေ့တာတိုပေမယ့် အားလပ်ရက်တွေ များတာကြောင့် ပိုပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ ဗိုက်ကလည်း ခဏခဏ ဆာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တခြားရာသီတွေနဲ့ မတူဘဲ ဆောင်းရာသီရောက်ရင် ဗိုက်ဆာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို ဖော်ပြပေးပါမယ်နော်။ ၁။ ရာသီဥတုအေးခြင်း ရာသီဥတု အေးလာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အပူချိန်တွေက ကျဆင်းလာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ကိုင်တိုင်က ကယ်လိုရီတွေ များများသုံးပြီး နွေးထွေးအောင် လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်များတဲ့၊ အဆီများတဲ့ အစားအစာ တစ်ခုခုကို ခဏခဏ စားချင်လာပါတယ်။ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်များတဲ့၊ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သဘာဝအတိုင်း နွေးထွေးအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ပိုပြီး သင့်တော်အောင် ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်များတဲ့ အစားအစာတွေ နေရာမှာ … Read more
ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှ မလုပ်ဘဲ ဗိုက်အဆီကျစေနိုင်တဲ့ ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းများ
ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှ မလုပ်ဘဲ ဗိုက်အဆီကျစေနိုင်တဲ့ ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းများ အလုပ်များလို့ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်နိုင်သူတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာ ပျင်းတဲ့ သူတွေအတွက် ဗိုက်အဆီကျစေမယ့် ထိရောက်သောနည်းလမ်းလေးများ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ယခုဖော်ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဖို့က လိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်ပါ ထိုင်တဲ့အခါ၊ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ကျောကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထားခြင်းက အမြင်အာရုံမှာ ပေါင်အနည်းငယ်လျှော့ချဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို အရှေ့ကို ကိုင်းထားတဲ့အခါ ဗိုက်ပူတာကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ဖြောင့်ဖြောင့် မတ်တပ်ရပ်ခြင်းက သင့်ရဲ့ဝမ်းဗိုက်ကို ချပ်စေပါတယ်။ ၂။ ရေဓါတ်ရအောင် ရေသောက်ပါ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ရေ(၈) ဖန်ခွက် လုံလောက်အောင် သောက်ခြင်းက ကီလိုအပိုအနည်းငယ်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆိပ်အတောက်များကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ရေတစ်ဖန်ခွက်ကို အစာမစားခင်သောက်ရမှာဖြစ်ပြီး စားပြီးရင်မသောက်ဖို့ … Read more
ပြေတီဦး၊ မအူဝဲ ၊ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ပိုပို တို့ အပါအဝင် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များ ပြန်လွတ်တော့မယ်။
ပြေတီဦး၊ မအူဝဲ ၊ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ပိုပို တို့ အပါအဝင် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များ ပြန်လွတ်တော့မယ်။ မဂ်လာပါ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပြေတီဦး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ပိုင်တံခွန် နဲ့ ပိုပိုတို့ကို သုံးရက်အတွင်း အပြီးလွှတ်ပေးဖို့ ရှိတယ်လို့ အားရဝမ်းသာစွာ ပြောပြလာတဲ့ရှေ့နေတစ်ဦး စစ်ကောင်စီကနေ အမှုရုပ် သိမ်းလိုက်တဲ့ ထိန်းသိမ်းခံ အနုပညာရှင်တွေကို ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်ကစပြီး ၃ရက်အတွင်း အပြီးလွှတ်ပေးသွားဖို့ရှိတယ် လို့ သူတို့ရဲ့ရှေ့နေတွေထံကသိရပါတယ်။စကစ ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ချက်မှာဖော်ပြချက်အရ အကြမ်းဖက်သူတွေနဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါ ဝင်သူတွေမှအပ ဆန္ဒပြဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်လှုံ့ဆော်မှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့လို့ အရေးယူ ခံထားရသူတွေကို ဖြေလျှော့ပေးလိုက်တယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။ ဆန္ဒပြစဉ်က ပါဝင်ခဲ့ခြင်း လူမှုကွန်ရက်ကို အသုံးပြုပြီး ဆန့်ကျင် လှုံ့ဆော်မှုတွေကို … Read more
နှာရည်ကျ၊နှပ်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေခဲ့လျှင် ဆားငွေ့ရှူနည်း…. တစ်ဆောင်းတွင်းလုံးနှာစေးနေခဲ့ရင်။ လူရှေ့သူရှေ့မရှောင်နှာရည်ကျ၊နှပ်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေခဲ့ရင်အလွယ်တကူစနဲ့၊ သက်သာစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ဆားငွေ့ရှူတဲ့နည်းပါဘဲ။ ငွေမကုန်ပဲသက်သာစေမဲ့ မီးဖိုချောင်ကဆေးနည်းလေးပါ။ ပြုလုပ်ပုံကတော့ ဟင်းရည်သောက်ကြွေပန်းကန်လုံးထဲမှာပရုပ်ဆီအနည်းငယ်သုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဆား၊ဟင်းစားဇွန်းနဲ့၃ဇွန်းထည့်ပါ။ ဆူပြီးသားရေနွေးသို့မဟုတ်ဓာတ်ဘူးထဲကရေနွေးပူပူလောင်းထည့်ပါ။ တက်လာတဲ့ ဆားအငွေ့ကို ဦးခေါင်းမှာတဘက်ပုဝါတစ်ထည်ခြုံပြီးကြွေပန်းကန်ထဲကတက်လာတဲ့အငွေ့ကိုရှူပေးပါ။ သေချာအငွေ့နှာခေါင်းထဲရောက်အောင်ရှူပေးပါ ပင်လယ်ထဲကဆားငွေ့လေရှူ သလိုမျိုးအကျိုးခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဆားငွေ့ဟာအဆုတ်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေပါတယ်။ နှာစေးတဲ့အရည်ထွက်ကျခြင်းကိုလည်းထိန်းစေပါတယ်။ လေရှူပြွန်ရောင်ခြင်းကိုလည်းသက်သာစေတဲ့အပြင်ပိုးများကပ်တွယ်ပေါက်ဖွားခြင်းမှလည်းဟန့်တားကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျနည်းပြီးဆေးရုံဆေးခန်းသွားစရာမလိုဘဲဒီနည်းကိုနေ့စဉ်မှန်မှန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အဆုတ်အအေးပတ်နှာစေး။ ထိပ်ကပ်နာဖြစ်ခြင်များမှကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ လေဖြတ်ပြီးအိပ်ယာထဲလှဲနေရတဲ့မိဘများကိုလည်း ဒီနည်းဖြင့်၊ ဆားငွေ့ရှူပေးခြင်းဖြင့် အဆုပ်ပွ၊ ချွဲဆိုက်ခြင်းဘေးမှကာကွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ လေဖြတ်သူများကိုအင်္ဂလိပ်ဆေးတိုက်ရုံနဲ့ပစ်မထားကြပါနဲ့။ သူတို့အဆုတ်မပွအောင်ဂရုစိုက်ကြပါ။ ဆားငွေ့ရှူပေးပါ၊ မနက်နေရောင်ခြည်လည်းပြပေးပါ။ ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) နှာရည်ကျ၊နှပ်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေခဲ့လျှင်…… ဆားငွေ့ရှူနည်း…. တစ်ဆောင်းတွင်းလုံးနှာစေးနေခဲ့ရင်။ လူရှေ့သူရှေ့မရှောင်နှာရည်ကျ၊နှပ်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေခဲ့ရင်အလွယ်တကူစနဲ့၊ သက်သာစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ဆားငွေ့ရှူတဲ့နည်းပါဘဲ။ ငွေမကုန်ပဲသက်သာစေမဲ့ မီးဖိုချောင်ကဆေးနည်းလေးပါ။ ပြုလုပ်ပုံကတော့ ဟင်းရည်သောက်ကြွေပန်းကန်လုံးထဲမှာပရုပ်ဆီအနည်းငယ်သုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဆား၊ဟင်းစားဇွန်းနဲ့၃ဇွန်းထည့်ပါ။ ဆူပြီးသားရေနွေးသို့မဟုတ်ဓာတ်ဘူးထဲကရေနွေးပူပူလောင်းထည့်ပါ။ တက်လာတဲ့ ဆားအငွေ့ကို ဦးခေါင်းမှာတဘက်ပုဝါတစ်ထည်ခြုံပြီးကြွေပန်းကန်ထဲကတက်လာတဲ့အငွေ့ကိုရှူပေးပါ။ သေချာအငွေ့နှာခေါင်းထဲရောက်အောင်ရှူပေးပါ ပင်လယ်ထဲကဆားငွေ့လေရှူ သလိုမျိုးအကျိုးခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဆားငွေ့ဟာအဆုတ်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေပါတယ်။ နှာစေးတဲ့အရည်ထွက်ကျခြင်းကိုလည်းထိန်းစေပါတယ်။ လေရှူပြွန်ရောင်ခြင်းကိုလည်းသက်သာစေတဲ့အပြင်ပိုးများကပ်တွယ်ပေါက်ဖွားခြင်းမှလည်းဟန့်တားကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျနည်းပြီးဆေးရုံဆေးခန်းသွားစရာမလိုဘဲဒီနည်းကိုနေ့စဉ်မှန်မှန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အဆုတ်အအေးပတ်နှာစေး။ ထိပ်ကပ်နာဖြစ်ခြင်များမှကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ လေဖြတ်ပြီးအိပ်ယာထဲလှဲနေရတဲ့မိဘများကိုလည်း … Read more
ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေသူများ ဒုက္ခအခက်အခဲ လွန်စွာများသူများ အတွက် ယတြာ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေသူများ ဒုက္ခအခက်အခဲ လွန်စွာများသူများ အတွက် ယတြာနည်းတစ်ခု ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ် တစ်ချို့ လူတွေမှာ ကံလေးကောင်း လာရင် စီးပွားရေးလေး ခဏကောင်း လာပြီး ကံညံ့လာရင်စီးပွားပြန်ကျ သွားတတ်၏။ တစ်ချို့သူတွေမှာ အလုပ်လွန် စွာလုပ်၏၊ ဉာဏ်လည်းအလွန်ကောင်း၏၊ ပညာလည်း အလွန်တတ်၏၊ ဝီရိယ လည်းလွန်စွာ ရှိ၏။ ဘာလုပ်လုပ် ၊ ဘာကိုင်ကိုင် အဆင်မပြေ သူများ လည်းတွေ့ရတတ်၏။ ကံဇာတာက ကောင်းပေမယ့်လည်း အဆင်မပြေ သူများလည်း ရှိတတ်၏။ ဘာကြောင့်ဖြစ် တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ များစွာ ထဲမှာ ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါး အနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ မိဘ ဆရာ ကျေးဇူးရှင်များကို စော်ကားပြောဆို မိလို့ ဖြစ်တာများ၏။ … Read more
သူမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေရာပါ အမှတ်တရလေး တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးကြောင့် အတိုင်းမသိ အံ့ဩပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မေပန်းချီ
သူမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေရာပါ အမှတ်တရလေး တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးကြောင့် အတိုင်းမသိ အံ့ဩပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မေပန်းချီ ပရိသတ်ကြီးရေ Model၊သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီကတော့ ဗီဒီယိုခေတ်ကတည်းက ဇာတ်ကားတွေ အများအပြားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေပန်းချီက စိတ်သဘောထားပြည့်ဝပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတတ်ကာ လူအချင်းချင်းပေါ်မှာလည်း ကူညီဖေးမပေးတတ်တဲ့ အနုပညာရှင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီလိုကာလမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ကာ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်အားဖြည့်လှူဒါန်းနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မေပန်းချီကို အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ သူမရဲ့အနုပညာကိုလည်းအားပေးကြသလို စိတ်ထားလေးကိုပါ ချစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း သူမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရလေး တစ်ခုကို သေရာပါအောင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်လေးတစ်ဦးကြောင့် အတိုင်းမသိ အံ့ဩပီတိဖြစ်နေရပုံကို ဖော်ပြလာပါတယ် ။ဒါကတော့ သူမရဲ့ နာမည်ကို ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ရေးထိုးရင်း ချစ်ကြောင်းကို သက်သေ ပြခဲ့တာပါ ။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် တက်တူး ပုံရိပ်တွေကို … Read more